Sina 2020 New Intellect Mini Insect Repactor Ultrasonic Intelligent Frequency Conversion Digital Display Mosquito Repactor orinasa mpamokatra sy mpamokatra | Jinjiang
ultrasonic pest repeller dia karazana vokatra elektronika haitao avo lenta izay mampiasa hazakazaka ultrasonika matetika manadio matetika hamokatra 22 ~ 65KHZ onjam-peo ultrasound matetika mamokatra ny rafitra endocrine sy ny fikorontanan'ny fiasa ara-batana amin'ny moka, kalalao, voalavo, tototry bibikely hafa ao anatin'ny elanelam-potoana misy iny sonika iny raha ny fandinihana ara-tsiansa, ka ahafahana mamono sy mamono ireo bibikely. Ireo onja ultrasonika dia tsy mampidi-doza ho an'ny olona sy ny biby hafa satria ny onja sonika mihoatra ny 20KHZ dia tsy henoin'ny olombelona.
Famaritana ny vokatra: ultrasonic pest repeller dia karazana vokatra elektronika teknolojia avo lenta izay mampiasa hazakazaka ultrasonic haavo haingam-pandeha hamokatra 22 ~ 65KHZ onjam-peo ultrasound matetika mamokatra ny rafitra endocrine sy ny fikorontanan'ny fiasan'ny moka, kalalao, voalavo, bibikely ary bibikely hafa ao anatin'ny elanelam-potoana misy azy io arakaraka ny fandinihana nataon'ny siansa, mba hitondrana sy hamonoana ireo bibikely. Ny onja ultrasonika dia tsy mampidi-doza amin'ny olona sy ny biby hafa satria ny onja sonika mihoatra ny 20KHZ dia tsy henoin'ny olombelona.
Noho ny fiarovana azy, tsy misy poizina, tsy misy tsirony ary avo lenta, dia be mpampiasa izy io. Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny trano, trano fanatobiana entana, fivarotana, hotely, hopitaly, birao, efi-masinina, zaridaina, fitoeram-bary amin'ny hotely sns. Vokatra mahomby: 60-100 metatra toradroa, ny vokatra tsara indrindra dia 60 metatra toradroa, ary iray ho an'ny efitrano tsirairay.
Fahefana lany 5-8W
Fametrahana sy fomba fampiasana:
1. hapetraka amin'ny socket power amin'ny rindrina 20-80 centimetatra miala amin'ny tany (ny socket napetraka mandritra ny haingo an-trano dia saika amin'ity haavo ity hatrany), mijanona mifototra amin'ny tany (aza hadino izany. fa ny vokatra dia tsy azo apetraka amin'ny tany). Raha tsy misy famatsiana herinaratra amin'ity haavo ity dia ilaina ny tabilao ivelany mba hitazonana ny vokatra amin'ity haavo ity ary mifandraika amin'ny tany.
2. Tsy hisy sakana lava ao anatin'ny 1 metatra miala ny eo anoloana ny vokatra (izany hoe tsy apetraka eo aorian'ny vata fampangatsiahana, fitafiana, sofa ary zavatra hafa).
3.Ny vokatra dia tokony hiatrika toerana somary misokatra ao amin'ny efitrano, fa tsy varavarana na varavarankely misokatra mandritra ny fotoana maharitra (ny onja ultrasonic dia miparitaka amin'ny tsipika mahitsy, izay hahatonga azy hiparitaka eny ivelany, ka hampihena ny hamafin'ny sahan'ny onja anaty trano sy mampihena ny fahombiazan'ny fanaraha-maso ny voalavo).
4.Ny vokatra dia tokony hialana amin'ny sezaky ny lambam-baravarana lamba sy lamba hafa arak'izay tratra (ny lamba dia mifoka rivotra onja).
5. Ny vokatra dia tokony hapetraka aloha amin'ny faritra misy fahasimbana lehibe indrindra. Rehefa esorina ny isan'ny biby mpikiky ao amin'ity faritra ity dia apetraho amin'ny toerana afovoany ao an-trano (toy ny efitrano fandraisam-bahiny) na ny toerana mora indrindra hidiran'ny totozy ny vokatra.
6.Ny vokatra dia hiasa tsy tapaka mandritra ny 24 ora mandritra ny fampiasana.
FAQ ho an'ny repeller rat
1. Inona no atao hoe onja ultrasonic?
Valiny: mamoaka feo ny zavatra iray rehefa mihetsiketsika. Ny mpahay siansa dia miantso ny isan'ny hovitrovitra isan-tsegondra ho toy ny faharetan'ny feo ao Hertz. Rehefa mihetsiketsika mihoatra ny refesina iray ny zavatra iray, izay avo kokoa noho ny halehiben'ny fahenoan'ny olona azy, dia tsy ho ren'ny olona izany, onjam-peo toy izany no antsoina hoe onja ultrasonic. Ny haavon'ny fihainoana ny sofin'ny olombelona dia eo anelanelan'ny 16HZ sy 20KHZ. Na dia tsy heno amin'ny olombelona aza ny feo ultrasonic dia biby maro no manana an'io fahaizana io. Ny ramanavy dia afaka mamoaka onja ultrasonikaly 20 000 ka hatramin'ny 100.000 HZ hanarahana sakafo na hisorohana ireo zavatra mampidi-doza. Toy ny "radar station" finday io, dia mampiasa an'io "radar" io ny ramanavy mba hahitana lasibatra sy hisamborana bibikely. Tsy tamin'ny ady lehibe voalohany akory vao ny olombelona dia nianatra nampiasa onja ultrasonic. Io no fitsipiky ny fampiasana "sonar" hamantarana ireo zavatra anaty rano sy ny fanjakan'izy ireo, toy ny toerana misy ny sambo mpisitrika. Ny onja ultrasonika dia tsy afaka miditra amin'ny sakana, ary manana toetra toy ny fitarihana mahery vaika, elanelana fampielezana fohy, fanalefahana haingana sy ny sisa. Ny fomba fampielezana ny onjam-peo ultrasonic dia ampitaina amin'ny alàlan'ny taratry ny zavatra manodidina azy, ary koa mamorona ny fisavana ultrasonika mba handrakofana ny toerana fisorohana sy fitsaboana rehetra. (Reference: Ny natioran'ny feo)
2. Raha efa nampiasaina hatry ny ela ny repeller totozy, hamokatra adaptability ve ny totozy? Tsy handeha ve izany?
Valiny: Tsia. Ny fiovana matetika mandeha microcomputer novokarin'ity vokatra ity dia miova tsy tapaka ary miverimberina, mba tsy hahatonga ny voalavo sy ny bibikely hafa hiova ho "adaptive" sy "immune" amin'ny matetika raikitra.
3. Inona no atao hoe ultrason rat repeller?
Valiny: ny ultrasonic rat repeller dia karazana fitaovana afaka mamokatra onja ultrasonic 20khz-55khz mifototra amin'ny fampiasana ny haitao matihanina acoustic pulse haingam-pandeha matihanina ary ny fikarohana siantifika momba ny fahatsapana fihainoana voalavo. Ny onja ultrasonic novokarin'ity fitaovana ity dia afaka manafika amin'ny fomba mahomby ny rafitry ny ratin'ny voalavo ary mitarika amin'ny tsy fetezan'ny ratin'ny vatana. Ity teknolojia ity dia avy amin'ny foto-kevitra mandroso fandrosoana peste any Eropa sy Amerika. Ny tanjon'ny fampiasana an'ity haitao ity dia ny hamoronana toerana avo lenta tsy misy voalavo sy bibikely, ary koa tontolo iainana tsy ahafahan'ny voalavo sy bibikely manimba, manery azy ireo hifindra monina ary tsy afaka miteraka sy maniry ao anatin'ny faritry ny fifehezana, mamono ny voalavo sy ny bibikely.
4. Tena mahazaka voalavo ve ny ultrasound?
Valiny: Ny biby toy ny voalavo sy ny ramanavy dia mifampiresaka amin'ny ultrasound. Ny voalavo dia namolavola rafi-pandihizana izay mora tohina amin'ny feo ultrasonic ary afaka mamantatra ny loharanon'ny feo ao anaty haizina. Rehefa maheno ultrasound 30-50 KHZ dia afaka miverina any amin'ny akaniny ireo voalavo tanora amin'ny alàlan'ny fandefasana ultrasound sy ny akony alohan'ny hanokafany ny masony (Referansa vahiny: Allin sy anks1971; Carden sy Hofer 1992). Rehefa ao anaty krizy ny voalavo olon-dehibe, dia afaka miantso vonjy amin'ny fandefasana feo ultrasonic. Izy ireo koa dia afaka mandefa onja ultrasonic haneho fahasambarana mandritra ny fanambadiana. Azo lazaina fa ny feo ultrôna no fiteny eo anelanelan'ny voalavo (Filazalazana avy any ivelany: Fay 1988, Warfield 1973, ary The Nature of Sound) .Koa, ny ultrasound mahery dia azo ampiasaina hanelingelina sy hanentanana ny rafi-pandehanan'ny voalavo, manao mahatsapa izy ireo fa tsy zaka, raiki-tahotra, manjavozavo, mandroritra ary soritr'aretina hafa, ka nahatratra ny tanjon'ny fandroahana ny voalavo avy amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana.
5.Nahoana no tsy mandeha ilay repeller rat izay novidiko teo aloha?
Valiny: ireto mety hitranga manaraka ireto dia mety hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fampiasana: Ny voalohany dia mifandraika amin'ny fizarana entana, rindrina fizarazarana na zavatra (sakana) Raha avo loatra ny hakitroky ny zavatra ao amin'ny faritra fifehezana, na mifatotra mivantana amin'ny tany ny entana, na be loatra ny zoro maty, rindrina fisarahana, sns., Ny tontolo iainana toy izany dia tokony hampitombo ny isan'ny mpamono voalavo; avo ihany -Ny fandrakofana ultrasoniana amin'ny fomba feno dia mety hahatratra ny vokatry ny fanaraha-maso ny voalavo. Ny faharoa dia ny fametrahana ny rat repeller koa dia misy ifandraisany betsaka amin'izany. Ny toerana misy ny repeller rat dia tsy tsara, ny tsy fitaratra hita maso dia mety hampihena ny fahombiazan'ny repeller rat. Arakaraka izay azo atao dia tazomy amin'ny toerana mamokatra onja be taratra sy miverimberina be ny ratanao. Ny fahatelo dia ny fisian'ny habaka be loatra hisorohana sy hifehezana, ary ny isan'ny fitaovam-panafoanana voalavo dia tsy ampy. Raha tsy voasarona tanteraka ny sakana sy ny fifehezana dia tsy ho tonga lafatra ny vokatry ny fanaraha-maso ny voalavo. Amin'ity tranga ity dia tokony hampitomboina ny isan'ny mpandroaka voalavo ary tokony hohamafisina ny hakitroky ny fanafihana ultrasonic hahazoana ny vokatra tsara indrindra.
6. Inona avy ireo olana tokony hojerena manokana rehefa mampiasa ny rat sy ny pest repeller?
Valiny: araka izay azo atao, ny seranan-tsolika ultrason an'ny rat repeller dia tokony hatrehana amin'ny toerana misokatra ao amin'ny efitrano, ary hialana amin'ny sakana roa metatra eo alohany na mivantana amin'ny varavarana na ny varavarankely, mba hisorohana ny fitarafana mandefa eo am-baravarankely mba hisy fiantraikany amin'ny vokany. Ity fitaovana ity dia tsy manana fiasan-drano ary tsy tokony hapetraka amin'ny toerana mando, ilay toerana misy karipetra na akaikin'ny lahatsoratra malefaka. Mba hisorohana sy hifehezana ny bibikely toy ny voalavo sy ny kalalao, miezaha hitandrina ny tontolo iainana madio sy hanapaka ny loharanon-tsakafo misy ny bibikely. Amin'ny fampiasana an'ity milina ity dia hahazo valiny mahafa-po ianao. Aza mampiasa sakafo hakana fanahy ny voalavo mba hizaha toetra ny vokatry ny fanafoana voalavo rehefa avy nampiasa azy io nandritra ny fotoana iray. Raha tsy izany dia very maina daholo ny ezaka nataonao teo aloha. Rehefa ampiasaina any amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana lehibe, fivarotana ary toerana hafa izay ahitana loharanom-bibikely bibikely, dia tokony hampitomboina ny isan'ireo mpanala totozy arakaraka ny maha-zava-dehibe ny bibikely hanatsarana ny vokany. ny famaritana dia manondro ny faritra fandrakofana refesina amin'ny habaka malalaka tsy misy sakana. Raha hampiasa manokana dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa aloha. Amin'ny andro voalohan'ny fampiasana dia ho hitanao fa lasa mavitrika kokoa ny voalavo sy ny kalalao, izay tranga mahazatra. Tsy mila matahotra ianao. Amin'ny fiandohan'ny fampiasana azy, ireo voalavo sy bibikely izay matetika miafina amin'ny maizina dia handositra tsirairay satria tsy zakan'izy ireo ny fanafihan'ny onjam-peo ultrasonika mahery vaika. Amin'izao fotoana izao, raha azo ampiasaina miaraka ny fandrika lakaoly totozy, ny fihinanam-bilona mitohy, ny mpamono kalalao ary ny trano kalalao, dia ho tsara kokoa ny vokany.
7. Mandra-pahoviana ny totozy sy ny veroka no mifamely?
Valiny: Rehefa manomboka mampiseho valiny ny vokatra aorian'ny fampiasana roa na enina herinandro dia hampihena be ny isan'ny voalavo, bibikely sy biby hafa.
Teo aloha: Air Cleaner Revitalizer Portable Home Air Purifier Anion Ozone Air Purifier Miaraka amin'ny Filter for Hospital Office
Manaraka: Ultrasonic Pest Repeller, Electronic Plug-in Mouse Repactor Bugs Cockroaches Mosquito Pest Repeller